Raheem Sterling oo laga saaray xulka qaranka England sabab la xiriirta dagaalkii uu la galay daafaca Liverpool ee Joe Gomez – Gool FM
(London) 12 Nof 2019. Dhaliyaha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Raheem Sterling ayaa la soo sheegayaa in laga saaray liiska xulka qaranka England ee dheelaya kulanka soo aaddan kaddib markii uu la dagaalay laacibka naadiga Liverpool ee Joe Gomez.
Raheem Sterling ayaa haatan ka maqnaanaya xulkiisa qaranka England ee la dheeli doona Montenegro kulan ka tirsan isreeb-reebka koobka qarammada Yurub.
Macallinka xulka saddexda Libaax ee Gareth Southgate ayaa tallaabadaas qaaday kaddib markii ciyaartoyda qaranka ay marqaati ka noqdeen in xiddiga Man City uu dib u soo kiciyay xaaladdii labada xiddig ku qabsatay garoonka Anfield.
Waxaa la sheegay in Sterling oo weli ka careysan dhibaatadii kooxdiisa Man City ku qabsatay garoonka Anfield uu bilaabay inuu ka falceliyo markii shalayto ay xiddigaha xulka qaranka England isugu yimaadeen St George’s Park.
Warbaahinta England ayaa daabacday inteeda badan in Gomez uu ahaa mid aad u deeggan oo aan la falgalin saaxiibkiis, isagoo la yaabay sida uu Sterling uga falceliyey wixii labadooda ku dhexmaray garoonka Anfield.
Tababare Gareth Southgate ayaana markii dambe go’aansaday in xiddigan Sterling uu ka eryo xerada tababarka xulka, xitaa iyadoo la sheegay inuu mardambe raaligelin siiyey saaxiibkiisa, taasoo aan ku filnaanin inay ku qancaan maamulka xulka qaranka England.
Si kastaba ha noqotee, Raheem Sterling ayaan ka qeyb qaadan doonin kulanka xulkiisa England uu la ciyaari doono Montenegro, laakiin waxa uu nasiib ku lahaa inaan Gurigiisa loo dirin, maadaama uu ka qeyb qaadan doono sida la sheegayo kulanka xiga ee xulka saddexda Libaax uu la leeyahay Kosovo.